SP-G09 SOICARE 200ml dhoobada bamboo dhoobada udugga saliida lagama maarmaanka ah, Shiinaha SP-G09 SOICARE 200ml Soosaarayaasha bamboo dhoobada udugga Aromatherapy Muhiimka ah Soosaarayaasha Saliida Kala Duwan, Soosaarayaasha, Warshad - Sunpai Industries Limited
SOICARE 200ml dhoobada bamboo dhoobada udugga Saliida Muhiimka ah
1.GREATL waxay hagaajinaysaa tayada hawada: Ka sokow isticmaalkeeda udugga, saliidaan faafiyeha ah ee muhiimka ah sidoo kale waxay u shaqeysaa sidii huurka. U adeegso si aad u wanaajiso tayada hawada iyo jawiga gurigaaga, si aad uga ilaaliso qoyskaaga hawo xad dhaaf ah oo qallalan, sheybaarka, xasaasiyadda, boodhka, iyo waxyaabo kale oo badan!
2. DHAMMAADKA DHAQAALAHA: Fidiyaha wuxuu la imaanayaa kayd biyo biyo ah oo 200ml ah oo kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysato caraf udgoon aan lahayn olol furan 2 JOOJI DHAMMAAN: Joogteyn joogto ah ayaa bixisa 10 saacadood oo xasaasiyad kulul leh, Xaaladda Isdhaafka ah ((30 sec ON, 30 sec Off) ) waxay bixisaa ugu yaraan 20 saacadood oo udgoon yar.
Hawlgalka aamusnaanta: Isticmaal tikniyoolajiyadda 'ultrasonic', saliida caraf udgoonka faafaya waxay soo saartaa ceeryaamo siman oo isdaba joog ah si loo qoyo guriga iyo udgoonka guriga. Hawlgalka aamusnaanta-aamusnaanta ah saameyn kuma yeelan doonto tayada hurdada.
4.Safe & Auto-off: Fidiyaha caraf udgoonka saliidaha lagama maarmaanka ah wuxuu socon karaa 5-10 saacadood Faafiyeyaashan saliida lagama maarmaanka u ah ayaa si otomaatig ah u demin doona ka dib markay biyuhu ka dhammaadaan nabadgelyadaada iyo ilaalinta faafiyeha carafta sidoo kale.
Waxyaabaha Bamboo Fiber + Wood ++ PP
Light Kulul diirran
M mugga mugga 15-20ml / saac
Waqtiga ugu dambeeya 5-10hours
Cabbirka Cutubka Φ135 * 110mm
miisaanka Unit 580g
Cabbirka sanduuqa midabka 156 * * 156 143mm
Cabbirka kartoonka 33 * 49 * 31CM
NW / kartoon 7kgs
GW / kartoon 7.8kgs
SP-USB09 difufiyaha saliida bilaa biyaha ah ee tartamaya